Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Pregabalin - Buyaas
Pregabalin (148553-50-8) mushonga unonyanya kutengeswa pasi pezita rekuratidzira reLyrica mumatunhu akasiyana siyana epasi. Mushonga unorwisa-epileptic uyo unonziwo anticonvulsant. Mushonga uyu unoshandiswa kudzikisa pfungwa dzehuropi zvinotungamira mukubatwa. Kune rimwe divi, Pregabalin anokanganisa makemikari ehuropi ayo anotumira masaini ekurwadziwa mukati mehurongwa hwemuviri wemuviri. Mushonga uyu unoshandiswawo mune yezvekurapa kuti ubate marroni akasiyana anokonzerwa nezvirwere zvakasiyana siyana senge nerve pain inokonzerwa ne fibromyalgia, chirwere cheshuga, uye nyangwe kurwadziwa kwemuzongoza.
Pregabalin (148553-50-8) inogona kushandiswa pamwe nemimwe mishonga kubatsira kurapwa kwekutanga kubata muvana vane makore anopfuura mana uye vakuru zvakare. Kwemakore mazhinji ikozvino, mushonga wave uchitamba chinzvimbo chakakosha munyika yekurapa, ichiita kuti ive imwe yezvinonyanya kurapa-inoderedza marawa pamusika. Mushonga uyu unofanirwa kungotorwa pasi pekunyorerwa nachiremba kuti uwane mibairo iri nani. Nekudaro, gara uine chokwadi chekuti unowana iyo Pregabalin kubva kumutengesi akatendeka kana mugadziri akakukomberedza.
MuUnited States of America, Pregabalin akabvumidzwa kushandiswa pakurapa kwezvirwere zvakadai;
Pano, yekutanga Pregabalin dosage iri 165mg iyo inofanira kutorwa kamwe pazuva, uye zvinokurudzirwa kuti uzvitore mushure mekudya kwemanheru. Iko zvakare kune mukana wekuti dosage iwedzerwe mberi kune 330mg mukati mevhiki yekutanga yedhidhi kutenderera. Mushure memaviri kana kwemavhiki ekurapa uye hapana kukosha kwakanyanya pakurwadziwa ipapo chiremba wako anogona kusimudza dosage yacho kusvika pakukwira iyo 660mgs pazuva. Kana uchichinja madhidhi, tora mangwanani acho kuti uburitse-ipapo wobva watanga mushonga wekuwedzera-mushure mekutora kudya kwako kwemanheru.
Heino yekutanga iyi 75mg inotorwa kaviri pazuva uye inogona kuchinjirwa ku150mg kaviri pazuva mukati mevhiki yekutanga yemupimo. Iyo dosage inogona zvakare kuwedzera kune 225mg kutorwa kaviri pazuva. Huremu hwakanyanya hwe fibromyalgia ndeye 450mgs uye chiyero chekuchengetedza chinenge 300mg kusvika 450mg. Kune rimwe divi, zvidzidzo zvinoratidza kuti kutora 600mgs pazuva hakupi chero humwe humwe rubatsiro hwePregabalin asi hunogona kuguma nemhedzisiro yakaipa.
Mazuva ekutanga eti dosage inopa chiremba wako mukana wekuti aongorore kufambira mberi kwako usati wafunga zano rekuchinja dhirairo pasi kana kumusoro. Zvidzidzo zvinoratidza kuti iwe unofanirwa kutarisira mhedzisiro mukati memazuva mashoma ekutanga eti dosage. Pregabalin mushonga unokurumidza kuita chiitiko, uye iwe unofanirwa, Saka, kutarisira kuti marwadzo acho achadzoreredzwa mukati memazuva mashoma ekutanga eti dosage. Kana iwe ukasawana chero kugadziriswa mukati mevhiki yekutanga yekutora dhesi yako, zivisa chiremba wako kuti agadzirise chiyero chemhedzisiro iri nani. Miviri yavanhu yakasiyana, uye hazvizvigone kuti unowana mhedzisiro nekukasira sezvinoita vamwe. Zvakare zvinoenderana nemamiriro ezvinhu auri pasi pemushonga wekuti, mhedzisiro yacho inosiyana. Zvimwe zvezvakajairwa Pregabalin mhinduro inosanganisira;
Chakavanzika chekunakisa miganho yePregabalin ndeyekubatanidza chiremba wako mune yose dosi maitiro. Usagadzirise iyo Pregabalin dosage pasina kuzivisa mushonga wako. Zvakawanda sezvaungagone kutenga mushonga kubva kuzvitoro zvakasiyana zvepa online, usatange kuutora usingaendi kunongororwa kurapwa. Mushonga uyu wave uine simba mukubvisa marwadzo anokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe vatambi vanoshandisawo Pregabalin kudzora marimba emutsipa, uye kurwadziwa kwemuzongoza, izvo zvakajairwa nekuda kwekushanda kwakawanda nemakwikwi.
6.Pregabalin hafu yehupenyu
Uku kukurumidza kuita-chinodhaka neanoshanda Pregabalin hafu yehupenyu yeawa 6. Naizvozvo, kune zviri nani Pregabalin mhedzisiro, iwo madosi anofanirwa kukamurwa kuva maviri kana matatu pazuva. Kuve mushonga wemuromo, zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane mhinduro sezvo ine pfupi kubvisa hafu-hupenyu. Nguva dzose yeuka kuomerera kune iyo dosi yemirairo yakapihwa nachiremba wako. Kunyangwe iwe ukatora yakaderera kana yepamusoro dosage, iyo hafu-hupenyu hwemushonga uyu unoramba wakafanana.
Kungofanana nemamwe madhiragi ari pamusika nhasi, Pregabalin inogona zvakare kukufumura iwe kune zvakakomba mhedzisiro kana iwe ukanyanya. Chikuru che Pregabalin mativi zvinokonzerwa nekushandiswa zvisirizvo kana dzimwe nguva kana system yako yemuviri ikaita zvisina kunaka nemushonga. Ndicho chikonzero nei nguva dzose zvichikosha kuti utange nemadosi akadzika, ayo anogona kuzogadziriswa nemedic yako mushure mekutarisisa kuti muviri wako unopindura sei pakurapwa. Mamwe emamwe anowanzoitika Pregabalin madhara anosanganisira;
Nhau dzakanaka ndedzekuti zvese izvi zvePregabalin zvinokanganisa zvinogona kudzorwa kana iwe ukaudza chiremba wako munguva kunyange hazvo mamwe mamiriro achizonyangarika nenguva kana iwe uchinge waona zvigadzirwa zvepamberi zvataurwa pamusoro apa usapfuurire kutora iwo mushonga usati waudza mushonga wako. Chiremba wako anogona kusarudza kurega danho racho kana mamiriro acho asingadzoreki kana kukurudzira imwe nzira, yakachengeteka mishonga kwauri.
Iwe unogona nyore nyore tenga Pregabalin poda muhuwandu kana zvakaringana chete kutenderera kwako kwemutengo kubva kuzvitoro zvakasiyana online, kana yepamhepo iri padyo sezvo zviri pamutemo munzvimbo dzakawanda dzepasi. Chiremba wako anozovawo munhu akakodzera kuti aratidze kwauri kwekutenga kwaari. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti utenge uye kushandisa mushonga wacho pasina kutya kwekukakavara nemutemo.
Tichitarisa kuongororwa kwakasiyana-siyana kwePregabalin, zviri pachena kuti vashandisi vazhinji vanoguta nemhedzisiro yavanowana mushure mekutora mushonga. Pregabalin inogara ichishandiswa semushonga unobatsira-kurwadzisa, uye wave uchigamuchira mhinduro dzakanaka kubva kune vazhinji vevashandisi. Vanotsvaga zvekurapa vakaisawo zvakawanikwa zvakasiyana, uye ndicho chikonzero nei FDA yakaibvumira kuti ishandiswe pakurapwa kweEpipps, Post-herpetic neuralgia kana marwadzo anoitika mushure mekurwara, chirwere cheshuga cheshuga neuropathy uye Fibromyalgia.
Nyika iri kuchinja, uye nhasi, unogona atenga Pregabalin powder online pachikuva chedu pamutengo unodhura. Webhusaiti yedu inosevenzesa-ishamwari, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti ufambe kubva kune chimwe chigadzirwa ichienda kune chimwe zvakare kuita yako yekurongeka mukati memasekondi. Iwe unogona kuwana webhusaiti yedu kuburikidza neyako smartphone, piritsi, kana kunyange laptop yako. Pamusoro peizvozvo, tinoita kuburitsa pasi rese uye mukati menguva pfupi pfupi inogoneka. Unogona kutenga Pregabalin muhuwandu kana kunyangwe zvakaringana kutenderedzwa rako reyero.
Isu tiri vanotungamira Pregabalin mutengesi mudunhu, uye edu anodhura mitengo haakanganise kunaka kwezvinhu zvedu zvigadzirwa. Isu tinopa akasiyana siyana emhando dzezvigadzirwa zvekurapa mudura redu repamhepo. Nekudaro, isu tinogara tichiraira vatengi vedu vese kuti vaone kuti vanoongororwa nekurapwa vasati vatanga kutora zvigadzirwa zvedu. Zvigadzirwa zvedu zvekurapa zvinogona kutungamira nemhedzisiro painoshandiswa zvisirizvo kana kuwandisa. Pregabalin inotengeswa inowanikawo pane yako yepamhepo mishonga yepamhepo asi ita shuwa kuti unowana kubva kumutengesi akavimbika. Haasi ese online epamhepo kana epamhepo mashopu ezvitoro anopa zvemhando zvigadzirwa.
Nekudaro, Pregabalin (148553-50-8) haisati yatenderwa kurapwa kwekushushikana muUS, kunyangwe paine mishumo yekuti vamwe vashandisi vanoishandisa-off label kudzora mamiriro. Mune mamwe matunhu epasi senge muEurope, Pregabalin yakave yakagamuchirwa mukurapwa kwekunetseka muvakuru. Kune zvakare mishumo isina kusimbiswa yekuti Pregabalin inogona kushandiswa kudzora kushungurudzika. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvePregabalin, bvunza chiremba wako kana kubvunza kune wemishonga wako.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Clinical hunhu uye kurapwa vanoshandisa pakati varwere fibromyalgia ichangobva yakatemwa amitriptyline, duloxetine, gabapentin, kana pregabalin. Arthritis kuchengetedza & kutsvaga, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin uye pregabalin yekurwadziwa-iri kuwedzera kutsanangura chikonzero chekushushikana ?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Kunyatsoita kwePregabalin mune acute postoperative pain pasi pezvikwata zvakasiyana zvekuvhiya: meta-ongororo. mushonga, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin yekurapa kwe generalized kusagadzikana kusagadzikana: yekuvandudza. Neuropsychiatric chirwere uye kurapwa, 9, 883.